Chennai Express (2013) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးနဲ့ ရယျရှငျကွညျနူးဖှယျ ဇာတျကားလေးပေါ့ ။ ရငျဘတျကွီးရဲ့ သနျမာမှုက လကျရုံး ခှနျအားထကျ ပိုမိုသာမှနျကွောငျး သကျသပွေစခေဲ့တဲ့ ဇာတျကားဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ဇာတျလမျးအကဉျြး ရာဟူးဟာ လူပြိုကွီးတဈယောကျပေါ့။
သူငယျစဉျကတညျးက မိဘနှဈပါးစလုံးမှာ အကျစီးဒငျ့ဖွဈခဲ့ကွပွီး အဘိုးက ကြှေးမှေး စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါတယျ။ အဘိုးလညျး ကှယျလှနျပွီးနောကျမှာတော့ ရာဟူးဟာ အဘိုးရဲ့ဆန်ဒအရ အရိုးပွာတှကေို ယမုံနာမွဈထဲ မြောခစြခေငျြတဲ့ သူ့ အဘှားရဲ့ ဆန်ဒကို ဆနျ့ကငျြပွီး တဈခွား နရောကို ခရီးသှားဖို့ လုပျပါတယျ။
ရာဟူးဟာ သူ့အဘှားကို လှညျ့စားဖို့ ယမုံနာ မွဈဆီသှားဖို့ Chennai Express ရထားလေးစီးနငျးခဲ့ရပွီး ရထားပျေါ၌ မီရာကို တှခေဲ့ပါသညျ။ မီရာဟာ မာဖီယားခေါငျးဆောငျတဈဦး၏ သမီးဖွဈပွီး အခုလညျး လူဆိုးတဈဦးနှငျ့ အတငျးပေးစားခံရသောကွောငျ့ ထှကျပွေးလာခဲ့သညျ။
မီရာဟာ သူမ၏ ဘဝအကွောငျးပွောပွခဲ့ပွီး သူမ၏ ခဈြသူ အဖွဈ ဖခငျရှတှေ့ငျ ဟနျဆောငျစခေဲ့သညျ။ တကယျတမျးတော့ ရာဟူးဟာ ကွောကျရှံ့တတျသူ ဖွဈပွီး မီရာလကျမှ အကွိမျကွိမျကွိုးစားခဲ့သျောလညျး မအောငျမွငျခဲ့ပေ။ ထို့နောကျမှာတော့ မခဈြတတျသေးသောရာဟူးအဖို့ ဘယျလို ပုံစံ ဖွဈမလဲဆိုတာကတော့ —???
ဇာတျညှနျးလေးကတော့ ဒီမှာပဲ ရပျထားပါရစေ။တကယျတမျး အနှဈသာရတှကေ ဇာတျလမျးရဲ့ ရညျရှယျခကျြကို ထိရှခံစားစနေိုငျမှာပါ။ ဒီကားလေးမှာတော့ မာဖီယားအသံကွားတာနဲ့ ကွောကျလနျ့တတျသူအဖို့ အခဈြ၏ခှနျအားရှိလာသညျ့အခါ မညျသို့ရငျဆိုငျလာသနညျး။
အခဈြနဲ့သံယောဇဉျတို့ကလညျး မညျသို့နှီးနှော ဆကျစပျနသေနညျး စတဲ့ အတှေးအမွငျတို့ကလညျး ဇာတျ၏ အခြို့အဆိမျ့ကို ပရိသတျအကွိုကျ ကွညျနူးစမှောပါ။ အခဈြစဈတို့ ခကျခဲပုံကတလီ ရယျစရာထှလေီတှကေတမြိုး မရိုးရအောငျ တငျဆကျထားပုံတှကေ အသညျးစိုငျကို ဘယျလို ခတျသှားမလဲ ဆိုတာကတော့ ပရိသတျကွီး ရငျခုနျလိုကျရအောငျ။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးနဲ့ ရယ်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် ဇာတ်ကားလေးပေါ့ ။ ရင်ဘတ်ကြီးရဲ့ သန်မာမှုက လက်ရုံး ခွန်အားထက် ပိုမိုသာမွန်ကြောင်း သက်သေပြစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ရာဟူးဟာ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ပေါ့။
သူငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘနှစ်ပါးစလုံးမှာ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး အဘိုးက ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဘိုးလည်း ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့ ရာဟူးဟာ အဘိုးရဲ့ဆန္ဒအရ အရိုးပြာတွေကို ယမုံနာမြစ်ထဲ မျောချစေချင်တဲ့ သူ့ အဘွားရဲ့ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး တစ်ခြား နေရာကို ခရီးသွားဖို့ လုပ်ပါတယ်။
ရာဟူးဟာ သူ့အဘွားကို လှည့်စားဖို့ ယမုံနာ မြစ်ဆီသွားဖို့ Chennai Express ရထားလေးစီးနင်းခဲ့ရပြီး ရထားပေါ်၌ မီရာကို တွေ့ခဲ့ပါသည်။ မီရာဟာ မာဖီယားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်ပြီး အခုလည်း လူဆိုးတစ်ဦးနှင့် အတင်းပေးစားခံရသောကြောင့် ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်။
မီရာဟာ သူမ၏ ဘဝအကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီး သူမ၏ ချစ်သူ အဖြစ် ဖခင်ရှေ့တွင် ဟန်ဆောင်စေခဲ့သည်။ တကယ်တမ်းတော့ ရာဟူးဟာ ကြောက်ရွံ့တတ်သူ ဖြစ်ပြီး မီရာလက်မှ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ထို့နောက်မှာတော့ မချစ်တတ်သေးသောရာဟူးအဖို့ ဘယ်လို ပုံစံ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ —???
ဇာတ်ညွှန်းလေးကတော့ ဒီမှာပဲ ရပ်ထားပါရစေ။တကယ်တမ်း အနှစ်သာရတွေက ဇာတ်လမ်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ထိရှခံစားစေနိုင်မှာပါ။ ဒီကားလေးမှာတော့ မာဖီယားအသံကြားတာနဲ့ ကြောက်လန့်တတ်သူအဖို့ အချစ်၏ခွန်အားရှိလာသည့်အခါ မည်သို့ရင်ဆိုင်လာသနည်း။
အချစ်နဲ့သံယောဇဉ်တို့ကလည်း မည်သို့နှီးနှော ဆက်စပ်နေသနည်း စတဲ့ အတွေးအမြင်တို့ကလည်း ဇာတ်၏ အချို့အဆိမ့်ကို ပရိသတ်အကြိုက် ကြည်နူးစေမှာပါ။ အချစ်စစ်တို့ ခက်ခဲပုံကတလီ ရယ်စရာထွေလီတွေကတမျိုး မရိုးရအောင် တင်ဆက်ထားပုံတွေက အသည်းစိုင်ကို ဘယ်လို ခတ်သွားမလဲ ဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီး ရင်ခုန်လိုက်ရအောင်။